Ose ari maviri equities muEurope neUnited States ave kuda kusvika pamatanho avo epamusoro mumutengo wekuchengetedzeka kwavo. Nezvimwe zviratidzo zvekushaya simba izvo shanduko yemamiriro inogona kuitika mumwedzi inotevera. Uye zvakare, hazvigone kukanganwika kuti mabhegi kubva kukota yechipiri yegore ari zvetsika bearish. Imo zvakare inotamba ichipesana nenyaya yekuti misika yeAmerica ine nhoroondo yenhoroondo mukukwira kwavo uye iyi mamiriro inofanira kumira pane imwe nguva kana imwe. Uye izvi zvinogona kunge zviri padhuze pakarenda.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yeSpanish stock stock vakatengesa mamirioni makumi mana nemakumi mana nemakumi manomwe emamiriyoni munaNdira, 6,8% kupfuura mumwedzi wapfuura uye mwedzi wakanakisa kubva muna Gumiguru, kunyangwe 18,6% yakaderera pane muna Ndira 2018. Huwandu hwekutaurirana hwakamira pamamirioni 3,6, anomiririra 15% kupfuura muna Zvita, maererano nedata razvino kubva Spanish Stock Exchange uye Misika (BME). Mune mamwe mazwi, vashoma uye varipakati varimari vari kuona kudzokorodza mukushanda semhedzisiro yeiyo kumusoro rally yakaitika muna Ndira. Nekuwedzera kwakapararira mumisika yese yemari.
Takatarisana nekukanganisa kuderera kwemisika yepasi rese yemisika, inguva yakanaka yekutsvaga dzimwe nzira dzekudyara. Mupfungwa iyi, mhinduro yakanaka inomiririrwa nemisika yemari yeimwe nyika dzichiri kusimukira. Uine upside zvinogona kupfuura misika yechinyakare. Kunyangwe kune rimwe divi, iwo mashandiro anotakura njodzi dzakawanda kupfuura mamwe ese nekuda kweakakosha hunhu hwemisika yemasheya iyi. Heano mamwe mazano ekutungamira kuchengetedza mumwedzi inotevera.
1 Kuonekwa: Brazil yekutanga
2 Tarisiro muSoutheast Asia
3 Ne njodzi, musika weTurkey wemusika
4 Dzimwe nzira dzekudyara
Kuonekwa: Brazil yekutanga
Simba reIbero -America ndiro rakanyanya kubheja nechikamu chakanaka chevaongorori vezvemari vekunze. Hazvisi pasina, maitiro ake ave akanaka kubva ipapo Jair Bolsonaro vakatora chigaro chemutungamiri wenyika. Iine kuwanda kwakakwira mumitengo yeiyi yakakosha pamusika wemari muAmerican continent. Iko Bovespa yakakwira mune ino nguva inopfuura 10% uye inoratidza isina hunhu hwetekiniki kubva kune ese maonero maonero. Neimwe nzira, inokonzerwa nemafungu ekushambadza munyika ino uye ayo misika yemari yakaita zvakanyanya.
Kubva pane akajairika mamiriro, yeBrazil stock market inogona kuve imwe yeiyo zvakajeka sarudzo kuti vashoma uye varipakati varimari vanofanirwa kuita kuchengetedza kwavo kunobatsira kubva ikozvino zvichienda mberi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zvezvivimbiso zvakanyorwa pamusika uyu wezvemari. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwo musika wekutengesa une njodzi dzakawanda uye izvi zvinofanirwa kushandira kukuita kuti uve wakangwarira mukuita kunoitwa.
Tarisiro muSoutheast Asia
Imwe yemisika yemari inogona kubatsira zvakanyanya kubva pachibvumirano chekutengeserana pakati peUnited States neChina hapana mubvunzo kuti ndiyo inomiririrwa nemadhiraizi eAsia. Zvese mune zvese sezvo ivo vari kutumbuka kukwirira kwakakwirira kunokwira uye chii chakanyanya kukosha kwauri, uine huwandu hunoshamisa hwekutora. Izvi zvinoratidza kuti vanogona kukudziridza kuwedzerwa kutsva kubva ikozvino zvichienda mberi, kunyangwe vachiziva kuti kuchave nekugadziriswa kwakakodzera panguva mumitengo yavo.
Iyi misika yepasi rose inogona kuumbwa mukati kushamisika kukuru kuti gore rino ratatanga rakatichengetera. Iko iri imwe yezvakanyanya kunaka muhurongwa hwepasi rose uye iine mukana wakakura wekudzokorora mumwedzi iri kuuya. Inogona kuve imwe nzira ine hukasha kune vashoma nevepakati varimari, chero bedzi ivo vachigona kudzora mashandiro avo kudzivirira mamiriro asingatarisirwi mumaaccount account avo Isu hatisi kutaura chete nezveChinese kana chiJapan musika wemusika, asi nezve nyika dzese dziri munzvimbo yakakosha yenzvimbo yepasi.
Ne njodzi, musika weTurkey wemusika
Hapana mubvunzo kuti kubheja kune njodzi pane zvese uye nekuda kweakakosha hunhu hweiyi musika wepasi rose wekuenzana. Iko kwaro stock index inogona kukwira zvakanyanya, asi zvakare inoderera pamwe yakakosha kukosha semhedzisiro yekushanduka kwehupfumi hweTurkey. Iko kunodzokororwa mumisika yezvemari yemari yayo zvakare kunoita basa rakakosha, kunyanya mune yayo shanduko nemari yekuNorth America. Ehe, njodzi dziripo, asi mibairo inogona kuve iri pakati peinoshamisa kwazvo mumisika yepasi rose.
Kune rimwe divi, iwo musika wekuenzana uyo inosiyaniswa nekusagadzikana zvakanyanya. Nemisiyano yakakosha kwazvo pakati pemitengo yayo yepamusoro neepasi uye izvo zvinoita kuti uyu musika wezvemari unakidze zvikuru mashandiro ekutengesa Naizvozvo, musika weTurkey wemusika ndeimwe yedzimwe nzira dzevatengesi dzinowanzotarisana nenjodzi uye vanoziva kudzora manzwiro avo panguva dzekusagadzikana kukuru. Nekuti ichokwadi kuti maeuro mazhinji anogona kusiiwa munzira uye havazi vese vanogona kutora ino yakakosha mamiriro.
Dzimwe nzira dzekudyara
Kunze kwemisika yemakambani yatakataridza, pane zvimwe zvishoma panguva ino. Kana zvachose kuratidzwa kudiki kune iyo russian stock exchange, zvinoenderana neshanduko mumutengo wemafuta asina kuchena. Asi nguva dzose mune vashoma nzira, ndiko kuti, pasi pekushanda kwemari diki kukosha. Kunyangwe nzvimbo dzichigona kuvhurwa kuburikidza nemari yekudyara mumari inoshanduka mune izvo zvikamu zvine zvakanyorwa pamusika wemari uyu. Inodzorwa kwese kwese mafambiro ekubvisa zvigaro.
Chekupedzisira, zvinokwanisika kuti uone zvinogona kuitika mune mimwe misika iri kubuda, senge inomiririrwa neyakaenzana yeIndia. Kunyangwe isu tingangononoka zvishoma sezvo zvinoita sekunge zvakanakisa zvapera. Chero zvazvingaitika, iwo musika une simba kwazvo uye uyo uchafanirwa kuongororwa kuti ndione kana ini ndopinda mune ino sitoko yemusika. Iko kune njodzi zvakare kwakanyanya uye zvinokurudzirwa kungwarira mukutora zvinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inguva yekudyara mumisika irikubuda?